သူမ သင့်ကိုချစ်နေလားဆိုတာသိဖို့ ဒီအချက်လေးတွေစမ်းကြည့်ရအောင် – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေက နားလည်ရခက်တယ်ဟုတ်!သူတို့မှာ အတွေးတွေအများကြီးလည်းရှိသလို တစ်ခါတစ်လေ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲစိတ်ဆိုးချင်စိတ်ဆိုးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်ရခက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုပေမဲ့ သူတို့သင့်ကို သဘောကျနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတာ ဒီလိုအချက်လေးတွေကနေ တစ်ဆင့်စမ်းကြည့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။
၁။သင့်ရဲ့ ဖုန်းမြည်သံကြားကြားချင်းပထမတစ်ချက်မှာသူမဖုန်းကိုင်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဒုတိယဖုန်းမြည်သံမှာဖုန်းကိုင်လေ့ရှိလား?
၂။သူမနဲ့အပြင်သွားတဲ့အခါ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ဖို့ သူမ မေးလား?ဥပမာ ငါတို့ဒီကော်ဖီဆိုင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာရအောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
၃။သင် တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ သူမပုံစံကသ၀န်တိုတဲ့ပုံစံပေါက်နေလား? အဲ့လိုအချိန်ကျရင် စကားနဲ့မပြောရင်တောင်သူမရဲ့ မျက်နှာသုန်မှုန်နေတာကိုမြင်တွေ့ရလား?
၄။သင့်အကြောင်းကို သူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုမကြာခဏပြောပြလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုကြားရလား?သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊သင့်သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ ပြန်ကြားတာမျိုးပေါ့။
၆။သူမရဲ့ မိသားစုတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သင်နဲ့ကိုရင်းနှီးစေချင်တဲ့စိတ်ရှိလား? သူငယ်ချင်းတွေ၊မိသားစုတွေနဲ့နောက်ကျရင်မ်ိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောတာမျိုးပေါ့။
သင့်ရဲ့ အဖြေရလဒ်တွေက Yes လား ?Noလား ?
သူမသင့်အပေါ်ကို သဘောကျနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် သင်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာ မစောင့်ရအောင်၊သူမကလည်းသင်နဲ့ဖုန်းပြောချင်တဲ့အတွက် ဖုန်းကိုမြန်မြန်ကိုင်တာပါ။ အပြင်ကိုနှစ်ယောက်အတူသွားတဲ့အခါမှာလည်း သင်နဲ့အတူရှိနေတာ ပျော်ရွှင်လို့ နောက်တစ်ခေါက်လည်းထပ်ပြီးတွေ့ဖို့ပြောတာပါ။ဘယ်မိန်းကလေးကမှ သူတို့သဘောမကျတဲ့လူကိုထပ်ပြီးမတွေ့ချင်သလို တစ်ချိန်လုံးလည်းပြုံးမနေနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုပါပဲ ကိုယ်သဘောကျတဲ့လူမို့လို့၊အရေးပါတဲ့လူမို့လုိ့သာ မိသားစုတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ရင်းနှီးစေချင်တာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ သ၀န်တိုစိတ်ပါပဲ။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူကတော့ ဘယ်သူကပဲကပ်ကပ်၊ဘယ်သူကပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ထဲကိုမရှိတာပါ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့လူမို့လို့သာ သူတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောရင် အလိုမကျတဲ့မျက်နှာမျိုး၊ခနဲ့တဲ့တဲ့စကားတွေဆိုတာမျိုးလုပ်လေ့ရှိကြတာ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတာကတော့ မိန်းကလေးတွေကသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေ နာကျင်ဝမ်းနည်းမှာကိုမမြင်ချင်ကြပါဘူး။ယောက်ျားလေးတွေထက် မိန်းကလေးတွေကပိုပြီး သူတို့ချစ်တဲ့သူအပေါ်ကို ဂရုတစိုက်ရှိတတ်ကြတာပါ။
သင့်ရဲ့ အဖြေရလဒ်က No ဆိုရင်တော့…
4 thoughts on “သူမ သင့်ကိုချစ်နေလားဆိုတာသိဖို့ ဒီအချက်လေးတွေစမ်းကြည့်ရအောင်”
Ei Cho Zin says:
မန်​မာစာ Font မမှန်​ဘူး ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ 🙂 🙂 🙂
သူ(ယောင်္ကျားလေး)က ကိုယ့်ကို ချစ်နေလားဆိုတာကိုဘယ်အချက်တွေနဲ့ သိနိုင်မလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြေားပေးပါရှင့်
Jasmine Phyu Thin says: